Tiyaatarka waxaa loo isticmaalay sidii ololaha cusub ee xayeysiinta McDonald | Abuurista khadka tooska ah
Muuqaalka soo jeedinta iyo masraxa ololaha 'McDonald'
McDonald's wuxuu inaga dhigaa inuu la qabsado xayeysiinta ololaha aad u gilgishay isla markaana awood u leh inay noo keento mucjisooyin muuqaal ah oo kan oo kale ah oo ay abuurtay wakaalada Jarmalka Leo Thjnkn Mahadsanid.
Runtu waxay tahay in fikradu ay tahay mid layaableh oo ay qaadato qaabka muuqaalkiisa weyn ee Big Mac in lagu "iftiimiyo" waxa ay yihiin meheradaha iyo sanaadiiqdu. Ololuhu waa sharaf iyo uumeeyaha maskaxdiisa ku qiyaasey madaxiisa, waa inaan halkaan ka bogaadinnaa.
Waxyaabaha kale ayaa ah in silsiladaha makhaayadaha cuntada degdega ahi ay kujiraan kicinta laba saddexdiiba mar macaanka mid ka mid ah cabitaankaaga leh sonkor badan. Laakiin haddii aan u tagno ololahooda, sidan oo kale kaas oo lagu isticmaalo shiilan faransiis ah inuu naga tago isagoo yaaban, ama isla kan lamid ah kuwa GIF-yadaas aan dhammaadka lahayn, runtu waxay tahay inay ka shaqeynayaan.
Ololahan xayeysiinta ah wuxuu ka kooban yahay sawirro taxane ah taas oo sawirka gaarka ah "lagu soo kiciyay"r qaar ka mid ah burgers. Waxyaabaha ay ka kooban tahay waa tiyaatar iyada lafteeda ka dhex heli kara meheradaha, sanduuqyada iyo dhinacyada ka kooban dhismayaashaan farshaxan aad u fara badan iyo walxahaas oo kale.
Hay'addu waxay awood u yeelatay inay soo bandhigto awoodda hamburgers-ka iyadoo hal ku dhig ku ah dhigayaa "hamburger qaabkiisii ​​ugu farshaxannimo badnaa", "Suugaan loogu talagalay dareenkaaga", iyo "oo aad si gaar ah u sameysay adigu." Sidii ay burgersku farmaajo ugu shiishi jireen, saladh iyo hilib si fudud ayaa meesha ku jiray ...
Hadda waan sugeynaa ololaha xayeysiiska ee soo socda kaas oo ay cunsurkeeda astaamaha ah inta badan la aqoonsan yahay waxaa mar kale adeegsada hay'ad xayeysiin ah oo mala-awaal iyo hal-abuurnimo lagu siiyo lacag la'aan. Marnaba kama joogsanayaan inay naga yaabaan, sidaa darteed waxaan dooneynaa wax badan oo dheeraad ah!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Muuqaalka soo jeedinta iyo masraxa ololaha 'McDonald'
Ajandayaasha asalka ah ee ku noqoshada dugsiga